Ijaaramaa: Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu. – Oromedia
Home » Marii » Ijaaramaa: Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu.
Bilisummaan yoo of ijaaran malee hin argamtu. Ijaaramuu dhabuutu gidduu kana harcaatuun sirna Nafxanyaa DCitt lafa isinitt dhiittee. Utuma jirtanii hubatamuu dhabdanii. Manesotaan ijaarameef seenaa hojjete. Oromiyaa Xiqqittiin, Oromiyaa guddichi maal akka fakkaatu saaxiltee. Hamma yoonaa Oromoon mootummaan Itophiyaan balleeffamuu irraa qabsoo saaniin baraaramanii. Ammas qabsoo itt fufaa taheen baraaramanii mirga ofii abbaa biyyummaa akka deebifatan warraaqaan hin shakkuu. Yoo dandahame Oromoon, “Ilaa fi Ilaameen” nagaan gara furmaataatti deemuu; aadaan saanii sanaa. Yoo hin taane diina of irra ittisuuf waan argatanitt dhimma bahuun mirga dhalootaatii. Ijaaramaa, ijaaramtan malee gadoodaa haftuu. Oromiyaan haa jiraattu!
Previous: Seenaa Qabsaawaa Oromoo Alamayyoo Dhugumaa (1958-1994)
Next: Seenaa Gabaabaa Weellisaa Jireenyaa Ayyaanaa